We Fight We Win. -- " More than Media ": “တော်တော်ပျံ တော်တော်ဝဲတဲ့ သမ္မတလူချောအဖွဲ့ ” (ဦးဝင်းတင်)
“တော်တော်ပျံ တော်တော်ဝဲတဲ့ သမ္မတလူချောအဖွဲ့ ” (ဦးဝင်းတင်)
ဘာတဲ့။ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က နောက်တစ်ဆက်ဆိုလား။နောက်တစ်သက်ဆိုလား သမ္မတလုပ်ဦးမှာဆို။ ဟုတ်လား။ ဖြစ်ရပြန်ပြီတစ်မျိုး။ဟိုတစ်ခါ ပြောသံကြားခဲ့ရတာကတော့ တစ်သက်တမ်းကျွတ်ရင် “ဂွတ်ဘိုင်” ပြီဆို။ ဘာတွေလဲဗျာ။ ရာဇပလ္လင်မှ တင်မနွေးသေးဘူး။ နောက်တစ်ရေး ကုလားထိုင်စကား ပြောလာကြပြန် ပလား။
သမ္မတလူချောအဖွဲ့ ကတော့ ပေါ်ပြူလာသမ္မတကြီး၊ လူထုအသည်းကျော် သမ္မတကြီး၊ ဖေးဘရိတ် သမ္မတကြီးဆိုတဲ့ ကရောင်းရိုက်သံ၊ ဗိန်းမောင်းတိုက်သံပေးနေကြမှာပေါ့။ သတင်းတွေ တေး၊ သတင်းတွေ မွေး၊ သတင်းတွေ ကျွေး၊သတင်းတွေ နွှေး၊ သတင်းတွေ ပေးနေကြမှာပေါ့။ အဲဒါတွေလုပ်တဲ့အခါမှာချောဆွဲခိုင်းတာမျိုးတွေ ရှိဆိုလား။ အငှားလိုက်ခိုင်းတာမျိုးတွေ ရှိဆိုလား။
သမ္မတ၀ိုင်းတော်သားတွေက ခြေအလှုပ်သား။ ခြေလှုပ်တယ်ဆိုတာခြေများတာ ပြောတာပါ။ ခြေများတယ်ဆိုတာကလည်း အကွက်များတာပြောတာပါ။ အကွက်များတယ်ဆိုတာလည်း အလှည့်များတယ် ပြောတာပါ။ဟော ကွယ် ပြောရင်းဖြေရင်း ရှုပ်ကုန်ပြီ။ အေးလေ။ လုပ်တာတွေ မရှင်းတော့ပြောတာဖြေတာတွေလည်း ရှုပ်ကုန်တော့တာပေါ့။ ဟာ.. ဒီလိုလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျုပ်ဆိုလိုတာက သမ္မတလူချောအဖွဲ့ က အာချောင်ချောင်။အဲ.. ဟုတ်ပါဘူး။ အာသွက်သွက်၊ လျှာသွက်သွက် ချက်ချက်ချာချာ ယန္တယားလူတွေမဟုတ်လား။ စက်ပစ္စည်းတွေလို လည်တာပတ်တာပေါ့။ ပြည်တော်ပြန်တွေကိစ္စလည်း သူတို့ ဘဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စလည်း သူတို့ ဘဲ။ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကိစ္စလည်း သူတို့ ဘဲ။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိစ္စလည်းသူတို့ ဘဲ။ တော်တော်ပျံ တော်တော်ဝဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဲဗျာ။
အန်တီလုပ်တာ အန်တီတာဝန်ယူတယ်။ အန်တီမှားရင်အန်တီခံမယ်။
U need to tell Daw Su.Why dont u tell her?Why she join the goverment?Do u have no fucking courage to critic Daw Su?
ဘယ်ကဦးဝင်းတင်လဲ ? ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် မဟုတ်ပါဘူး ဓါတ်ပုံကိုတော့ယူသုံးထားပါတယ် ။ စာပါအကြောင်းအရာကို အပြောလိုပါ သူများနာမယ်ကိုယူသုံးတာတော့ အဆင့်မရှိဘူးလို့ ထင်တယ် ။